R/wasaare Cabdi Weli iyo shan ka mid ah Golaha Wasiirrada oo booqasho ku jooga Itoobiya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
14th February 2014 MAREEG Af Soomaali 0
Addis Ababa – Mareeg.com: Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed iyo wafdi uu hogaaminayo oo ay ka mid yihiin qaar ka tirsan Xukuumaddiisa oo gelinkii dambe ee shalay ka ambabaxay magaalada Muqdisho ayaa gaaray xalay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia.
Socdaalka Ra’iisul Wasaaraha uu ku joogo Addis Ababa, ayaa waxaa uu qayb ka yahay booqasho rasmi ah oo uu ku marayo dalalka Ethiopia iyo Djibouti.
Wafdiga Ra’iiusl Wasaaraha waxaa ka mid ah Wasiirka Arimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, Wasiirka Maaliyadda Xuseen Cabdi Xalane, Wasiirka Warfaafintan Mustaf Dhuxulow, Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada Siciid Maxamed Qoorsheel, Wasiiru-dowlaha Gaashaandhigga Maxamed Cali Xagaa iyo xubno kale.
“Socdaalkan aan kusoo gaarnay dalka Ethiopia waa mid aan ku xoojinayno xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia, waxaan iska kaashan doonnaa arrimo ay ka mid yihiin Amniga iyo la dagaalanka xagjirka khatarta ku ah guud ahaan gobolka, waxaa kaloo aan iska kaashan doonnaa arrimaha kale ee siyaasadda iyo dhaqaalahu ay ka midka yihiin.” ayuu yiri R/wasaaraha Soomaaliya C/weli Sheekh Axmed.
“Ethiopia waxaa ay ka mid tahay dalalka dariska ah ee qaybta ka ah howlgallada AMISOM ee xasilinta amniga iyo la dagaalanka xagjirka, waxaa la gaaray xilligii aan sii xoojin lahayn howlgallada ay iska kaashanayaan dawladda iyo dalalka dariska ah si loo soo afjaro kooxaha Nabad-diidka ah ee cadawga ku ah nolosha shacabka Soomaaliyeed, Gobolka iyo guud ahaan caalamka” ayuu sidoo kale yiri Ra’iisul Wasaare C/weli Sheekh.
Booqashada Raysulwasaare C/weli Sheekh iyo xubnaha ka tirsan golihiisa wasiirada ku tageen magaalada Addis Ababa ayaa kusoo beegmay xilli la hadal hayo howlgallo milateri ee ciidamada dalkaas eek u biiray AMISOM ka sameynayaan gobollo ka mid ah Soomaaliya.